Newa Times : सत्यसम्म पुग्ने कुनै बाटो छैन
हामी एउटा नीति, आचार, सिद्धान्त र निर्देशनमा अभ्यष्त छौं । कुनै एउटा आस्थालाई आफ्नो आधार बनाएर अर्को आस्थाप्रति अनास्थामा बृद्धि गर्नुलाई नै बुद्धिमान ठान्छौं । राम जन्मभूमि, बावरी मस्जिद भड्काउने अथावा पुनः निर्माण गर्नुमा नै गौरव मानिराखेका हामीले बुझ्नै सकिराखेका छैंनौं– यी सबै कुरा के कारणले भइराखेका हुन् ? बाबरी मस्जीद भड्काउनै पर्ने अथवा यथास्थितिमै राख्नु पर्ने किन ? यी सबै एउटा एउटा आस्थाको उपज हो । अनि आस्थाको उपज भन्ने कुरा अर्थहीन छ । यो अर्थहीन कुरा हामी देख्दैनौं । जाति, भाषा, धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रियता, इष्र्या, द्वेष मोह सबै अर्थहीन कुरा हो । यी कुराहरु विचार नगरी पूर्वाग्रही नभई हेर्दा अर्थहीन देखिनु र एकै पल्ट हामी परिवर्तन हुने कुरा नै उनका पुस्तकहरुको निचोड अथवा सारसंक्षेप पो हो कि भन्ने लाग्छ । उनी एउटा सत्यान्वेषक हुन् । सत्यान्वेषकको योग्यता बारे उनी भन्छन्– सत्यान्वेषणको निम्ति ती सबै कुराहरु अस्वीकार गर्नु पर्दछ जुन कुरा अरुले पहिल्यै भनिसकेका हुन्छन् ।